मोहनविक्रमद्वारा वाम एकताको स्वागत, ‘वास्तविक कम्युनिष्ट’ बने सामेल हुने संकेत - Naya Patrika
मोहनविक्रमद्वारा वाम एकताको स्वागत, ‘वास्तविक कम्युनिष्ट’ बने सामेल हुने संकेत
नयाँ पत्रिका, चितवन, २१ असोज | असोज २१, २०७४
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बाम एकता स्वागतयोग्य रहेको बताउए । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधानका पक्षधर शक्ति एक हुनु राम्रो भएको भन्दै अहिले भएको वाम एकता स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
निर्वाचनमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने भावना मात्रै होइन अब दीर्घकालीन एकता आवश्यक रहेको उनको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘तत्काल कम्युनिष्ट एक भएर एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुने देखिदैन । बाम एकतापछि काँग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्ति पनि एक हुन सक्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सबै कम्युनिष्ट एक हुनुपर्छ ।’
अहिले पनि आफ्नो पार्टी संघीयता बिरोधी रहेको बताउँदै उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनले मात्रै संघीयता स्थापित नहुनेमा जोड दिए ।
एमाले र माओवादी दक्षिणपन्थी रहेको बताउँदै उनले अब यसलाई वास्तविक कम्युनिष्ट बनाउन सके मात्रै पार्टी एकतामा जान सकिने विचार व्यक्त गरे ।
‘पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरण’ विरुद्द सर्वोच्चमा रिट !
काे–काे हुन् बन्दसूचीमा पर्ने कांग्रेसका शीर्ष नेता !
साढे ५ बजे पार्टी एकिकरण : कांग्रेसले लोकतान्त्रिक फोरम भित्राउँदै